Metal Sensation Ultra Creamy Eyeshadow 020 | CATRICE COSMETICS
Metal Sensation Ultra Creamy Eyeshadow 020
Soft & Shiny. The super soft, creamy texture withabouncy touch is ideal for creating smooth, metallic eye make-up styles. Available in four shades.
The trend of the hour: Metallic Eyes. For this look, make-up artists always createaflawless, matt complexion first. To make sure that the metallic pigments don’t accentuate any skin irregularities or redness, it is recommended to prepare the face with moisturizer and foundation and cover small skin flaws with concealer. Alternatively, it’s enough to emphasize the lips and cheeks withasoft rosé shade so that the focus is entirely on the Metallic Eyes.
နူးညံ့ပြီး တောက်ပတယ်။ အရမ်းနူးညံ့ပြီး ခရင်မ်အသားနှင့် တုန်တုန်သား eyeshadowလေးက အသုံးပြုတဲ့အခါ ချောချောမွေ့မွေ့လေးဖြစ်နေစေရန်နှင့် Metallic Eye-makeup styleလေး ရရှိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်၎ရောင်နှင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Metallic Eyesအတွက် အချိန်အခါကျရောက်နေပါပြီ။ ဒီ eyemakeup lookအတွက်ကတော့ မိတ်ကပ်ဆရာတွေဟာ အမြဲတမ်း ချောမွေ့တဲ့ mattမျက်နှာပြင်ကို အရင်ဆုံးဖန်တီးကြပါတယ်။ ဒီ Metallicအမှုန်လေးတွေက အသားအရေနှင့် ဓာတ်မတည့်မှု ၊ နီမြန်းမှု မရှိတာ သေချာစေရန်အတွက်.. Moisturizer ၊ Foundation အရင်လိမ်းပေးပြီး Concealerအနည်းငယ်နှင့် ဖုံးပေးပါ။ နှုတ်ခမ်းနှင့် ပါးကို နှင်းဆီရောင်ဖျောဖျောလေးလိမ်းခြယ်ပေးမယ်ဆိုရင် Metallic eyes makeup lookကို ပိုမိုထင်ရှားစေမှာပါ။
DIMETHICONE, GLYCERIN, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, MICA, DIMETHICONE/VINYLTRIMETHYLSILOXYSILICATE CROSSPOLYMER, CYCLOPENTASILOXANE, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, SILICA, HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, GLYCERYL CAPRYLATE, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, GLYCERYL UNDECYLENATE, PROPYLENE CARBONATE, TIN OXIDE, AQUA (WATER), BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77510 (FERRIC AMMONIUM FERROCYANIDE), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE).